Crossroads Inn: Project Nhau | Linux Vakapindwa muropa
Takatotaura nezvazvo Crossroads Inn muLxA, iyo tavern simulator mune yekufungidzira nyika, Kana uchirangarira. Uyu mutambo wevhidhiyo waunogona kuwana pane yake saiti Steam, iyo Valve chitoro. Zuva raro rekuburitsa ndiGumiguru 30, 2019, nekudaro, kwasara mazuva mashoma kuti usati warodhavira nekunakidzwa Iwe unogona zvakare kuiwana mune yeGOG online vhidhiyo yemitambo chitoro, kunyangwe paine pasati paine peji remusoro uyu ipapo (panguva yekunyora chinyorwa ichi).
Kana uchida, iwe unogona zvakare kuona ruzivo nezve Crossroads Inn pa yako Kickstarter peji, kubva kwazvakazivikanwa uye kwayakaita yanga ichizvitsigira pachayo kuburikidza nechaunga chemari kwenguva yekuuya kwatiri izvozvi. Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti pakati pemapuratifomu ayo yaanosvika, kune zvakare Linux, nekudaro, haufanire kushandisa Steam Tamba neProton, Waini, kana chero chinhu chakadai, asi unogona kuchimhanyisa natively pane yako yaunofarira distro.
Uye tataura izvozvo, ngatione zvimwe zvacho zvakasarudzika maficha:
Vhidhiyo mutambo mu chaiyo nguva yekunyepedzera (yematavern) uye RPG, ndokuti, zvebasa.
Zvese zvinoitika mukati nyika yekufungidzira iine basa rinonakidza remifananidzo kumashure kwake.
Inogona kutambirwa mukati nzira mbiri zvakasiyana: mushandirapamwe nenyaya isina-mutsara (gumi nemaviri magumo) uye muSandbox modhi.
Yakapfuma uye yakazara hurongwa hwehurongwa, Kukubvumidza iwe kuumba mubatanidzwa, shanda uchipesana nemunhu wese, nezvimwe.
Imwe yakanaka culinary ushingi yakagadzirirwa mukubatana nenyanzvi kubva kuNerds'Kitchen. Iwe uchawana mabikirwo, gadzira madhishi matsva, shandisa akasiyana mamamenyu, nezvimwe.
Un yakaoma simulation system yehupfumi kune yako tavern, iyo inobvumidza iwe kuti ugadzire mapoka evatengi, akakosha uye akasarudzika vashanyi, vashandi venguva dzose, manejimendi zviwanikwa, kuvaka uye kuvandudza zvitsva ...
Soundtrack yakanyorwa netarenda Marcin Przybylowicz, iine echinyakare zviridzwa zviridzwa kubva kwakasiyana tsika uye eras.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Crossroads Inn: nhau dzepurojekiti
Dash kuDock 67 iri pano, nerutsigiro rweGnome 3.34 uye nezvimwe